Email Viewing Habits na-agbanwe Agbanwe | Martech Zone
Email Viewing Habits na-Agbanwe Agbanwe
Monday, September 19, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Ihe omuma a di egwu site na Litmus na-egosi oke mgbanwe mgbanwe omume nlele email na afọ gara aga! Site na infographic:
Email ka bụ ọrụ ịntanetị kachasị ike gburugburu ụwa. N'ezie, a na-atụ anya ka ndị ọrụ email ruru ijeri 3.8 site na 2014; nke ahụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị bi n'ụwa ugbu a, na ịrị elu dị ịrịba ama site na ndị ọrụ 2.9 ijeri ndị akọọrọ na 2010. Ugbu a na ọtụtụ ndị nwere ekwentị na iPads, ọ dị onye ọ bụla ka na-abanye na-ele ozi ha na nyochaa? N'ebe a, anyị lere anya na ekwentị anyị na "ihe egwuregwu" ndị ọzọ eji teknụzụ agbanweela etu anyị si ele email.
WordPress rel = ”prev” na rel = ”na-esote”
Sep 23, 2011 na 4:44 PM
Akwa isiokwu! Awesome graphic na magburu onwe ya ọmụma, nnọọ mfe ogugu. Ndị ahịa anyị na EmailList.net na-akọ akụkọ yiri nke ahụ dabere na nyocha ha na nke anyị. Email ka dị ike n'oge a ma hụ ọnụ ọgụgụ dị ka nke a na-eme ka m nwekwuo obi ike na anyị na-enye ndị ahịa anyị ọrụ bara uru!
Daalụ maka edemede ahụ!